Fikarohana momba ny firaisana Raharaha Reincarnation an'ny Revolisiona Amerikanina, Silversmith ary Artist Paul Revere | Ilay mpilalao sarimihetsika sy mozika Jack Black - Fikarohana Reincarnation
Mpanolotsaina: mpanohana an'i ReincarnationResearch.com miorina amin'ny tranokala Internet Look-Alike
Paul Revere sy ny Revolisiona Amerikanina
Paul Revere dia olo-malaza teo amin'ny Revolisiona amerikana fanta-daza indrindra tamin'ny fihodinan'ny soavaly antsasak'alina izy ary nampitandrina ireo olom-pirenena tany Massachusetts fa ny British dia efa akaiky an'i Boston. Ity fandrosoana anglisy ity dia nitarika ny ady voalohany tamin'ny ady, izay nitranga tao Lexington sy Concord, Massachusetts.
Ho fanampin'izay dia mpanakanto i Revere. Mpanefy volafotsy izy ary namorona sary sokitra varahina izay maneho ny Fandripahana an'i Boston, tranga iray izay nahatonga ny zanatany amerikana hikomy tamin'ny anglisy.
Ity sary sokitra ity dia aseho amin'ny havanana.
Ny fanehoan-kevitr'i Jack Black an'i Paul Revere
Mpanakanto ihany koa i Jack Black, olona nifantoka tamin'ny fihetsika sy ny mozika. Eny tokoa, iray amin'ireo sarimihetsika tiako indrindra, Nacho Libre, kintana Mainty.
Jack Black dia manana endrika mitovy amin'ny Paul Revere. Ny fampitahana sary roa dia tao amin'ny Internet nandritra ny taona vitsivitsy, ho porofon'ny fitoviana endrika amin'ny tranga reincarnation dia nitombo tao anaty fanentanana sy fahalianana.
Na izany aza, ny fitoviana ara-batana amin'ny tenany dia tsy manaporofo ny fiainany taloha ary nieritreritra aho fa i Black no Revere.
Na izany aza, tao anatin'ny fivoriana nifanaovana tamin'i Kevin Ryerson, izay mitondra fanahy antsoina hoe Ahtun Re, izay naneho ny fahaizana manao ny lalao amin'ny fiainana taloha miaraka amin'ny mari-pahaizana avo lenta, dia nanontany aho momba ity raharaha natolotra ity. Ahtun Re dia nanamafy fa i Jack Black dia reincarnation an'i Paul Revere.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana manaitra eo amin'i Paul Revere sy i Jack Black.
Talenta fiainana taloha sy fitondran-tena ary fahaiza-manao: Matetika ny artista dia manohy manangana zavakanto hatrany amin'ny fiainana mandra-pahafatiny, na dia mety hiova aza ny endrika zavakanto. Paul Revere dia mpanao volafotsy izay nanao sokitra ihany koa, ary i Jack Black kosa dia naneho ny toetrany noforoniny na dia sarimihetsika sy mozika aza.
Ny fanovana amin'ny fivavahana sy ny fironana ara-poko: Paul Revere, teraka tao amin'ny zanatany amerikana talohan'ny Ady Revolisiona, dia Kristiana sy teratany frantsay. Jack Black, izay teraka tany Amerika na Etazonia ihany koa dia natsangana jiosy.
Ny fahatakarana fa ny fanahy dia afaka manova ny fivavahana sy ny fifandraisan'ny foko avy amin'ny androm-piainany mankany amin'ny iray hafa dia afaka manampy amin'ny famoronana tontolo milamina kokoa, satria ny ankamaroan'ny ady sy ny fifandirana dia miankina amin'ny fahasamihafana amin'ireo marika ara-kolontsaina ireo.
Sarintany Reincarnation artista
Sarimihetsika famerenana amin'ny fahitalavitra sy fahitalavitra